सहुलीयत दरमा गाउँ–गाउँमा जैविक मल - Pradesh Dainik
बर्खायाममा कृषकलाई चाहिने मलको जोहो गर्न यतिबेला किसानहरू लागिरहेका छन् । धान रोप्ने समय आएसँगै यो चहलपहल बढेको छ ।
मल कसरी पाउने ? किसान चिन्तित देखिन्छन् । सहुदलीय दरमा मल पाउने कुरामा किसानहरूको चिन्ता बढी देखिन्छ । यहि समयमा सहुलियतमा मल दिएर अनुकरणीय काम गरेको छ मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. ९ मा रहेको नवप्रतिभा युवा क्लब र माछापुच्छ्रे बैंकको शाखा कार्यालयले ।
७० प्रतिशत रेट रहेको जैविक मललाई ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको र १५ प्रतिशत नवप्रतिभा युवा क्लबले २० रूपैयाँ प्रतिकिलो दरभाउका हिसावले किसानलाई सहुलीयत दरमा वितरण गरिएको सो क्लबका अध्यक्ष बीरेन गुरूङले जानकारी दिए । उक्त मल वितरणमा प्रमुख अतिथि संविधानसभा सदस्य चण्डीप्रसाद राईं र अतिथिहरु वडा नं. ९ वडासदस्य इन्द्रावति गुरूङ रहेको जानकारी माछापुच्छ्रे बैंक शाखा प्रमुख डिल्लीराम भट्टराईंले बताए ।
झण्डै ३५/४० जना कृषकलाई कृषि प्राविधिक कृष्णचन्द्र महर्जनले उचित जैविक मल प्रा.लिबाट उत्पादित अर्गानिक मल र मल प्रयोगबारे अभिमुखी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रमको आयोजनाले स्थानीय समुदाय लाभावान्वित भएको कुरा कार्यक्रममा सहभागी कृषक बालकृष्ण कार्कीले जनाए । कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लामो समयसम्म चलिरहने विषयसम्बन्धी क्लबका अध्यक्ष गुरूङले बताए ।